तुलसी घिमिरेका चर्चित पाँच फिल्म कुन कुन हो? - खबरम्यागजिन
Homeमनोरञ्जनतुलसी घिमिरेका चर्चित पाँच फिल्म कुन कुन हो?
April 7, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि मनोरञ्जन 0
धनी र गरिबबीचको भिन्नता दर्शाउन खोजिएको यो फिल्म सन् १९८५ मा बनेको रोमान्टिक चलचित्र हो। फिल्ममा पहिलो पटक गायक उदितनारायण झाले अभिनय गरेका छन्। प्रेमकथामा आधारित यो फिल्ममा अमर (उदितनारायण) र सुनीति (तृप्ती नाटगर) कलेजमा सँगै पढ्ने साथी हुन्छन्। जहाँ अर्जुन (भुवन केसी) को पनि भूमिका छ। यो फिल्म बक्स अफिसमा लामो समयसम्म राम्रो कलेक्सन गर्न सफल चलचित्र बन्यो। फिल्म २५ हप्तासम्म हलमा लागेको थियो। यो नेपालको पहिलो बल्कबस्टर फिल्म थियो।
एक्सन, रोम्यान्स, कथा र गीत संगीतले भरिपूर्ण फिल्म हो, चिनो। यो फिल्म नेपाली सिनेमा जगत्मा व्यावसायिक सफलता हासिल गर्ने पहिलो चलचित्र हो। विष्णुगोपाल श्रेष्ठले निर्माण गरेको यस फिल्ममा नायक शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी, सुनील थापा, कृष्टि मैनाली, शर्मिला लामा, शुभद्रा अधिकारी आदि कलाकारको अभिनय देख्न सकिन्छ। यस फिल्ममा रञ्जित गजमेरले म्युजिक डिरेक्टर गरेका थिए। नारायणगोपाल र आशा भोस्लेले गाएको यसै फिल्मको गीत ‘मोहनी लाग्ला है’ नामक गीत अहिले पनि उत्तिकै चर्चित छ।
सन् २००१ मा बनेको चलचित्र दर्पणछाया एक म्युजिकल रोमान्टिक फिल्म थियो। जसमा नायक दिलीप रायमाझी, उत्तम प्रधान र नायिका निरुता सिंहको अभिनय देख्न सकिन्छ। साथै निर्देशक तुलसी घिमिरेको पनि अभिनय रहेको छ। प्रेम र मित्रताको विषयलाई कथामा उठाइएको यो फिल्म चर्चाको शिखरमा रह्यो। फिल्ममा राज (दिलीप रायमाझी) र अभि (उत्तम प्रधान) को प्रगाढ मित्रता देखिन्छ। जहाँ अभि दृष्टिविहीन हुन्छन्। फिल्मको अन्त्यमा स्मृति (निरुता सिंह) को मृत्यु हुन्छ। उनले आफ्नो आँखा अभिलाई दान गर्छिन्।
सन् १९९४ मा बनेको यो फिल्म तुलसी घिमिरेले आफ्ना गुरु कम्लाकार कर्खानिस्का लागि बनाएका थिए। तुलसीले दस नेपाली चलचित्र बनाउने वचन दिएका थिए आफ्ना गुरुलाई। दक्षिणा त्यसैमध्येको एक हो। फिल्ममा एक प्राध्यापक र उनका विद्यार्थीको टसल देख्न सकिन्छ। विद्यार्थी प्रभाकर जो नेता बन्न चाहन्छ। नेता बन्ने सपना सधैं देख्छ। राजनीतिक पार्टीमा सामेल हुन्छन्। पछि प्राध्यापक हरि सर आफ्नो मन्त्री बन्ने बाटोमा ठूलो अवरोध भएको प्रभाकरले पाउँछन्। फिल्मको मुख्य विषय शिक्षक, विद्यार्थीको हो।
फिल्मले अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ। नेपाली समाजको ऐना बनेर दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेको यो फिल्मले देशको लागि बलिदान दिने नेपालीहरूको गाथा बोल्छ। फिल्ममा देशभक्तिको विषयलाई प्रस्तुत गरिएको छ। लोकतन्त्रको बहाली र जनताको स्वतन्त्रता फिल्मको मुख्य कथावस्तु हो। यो फिल्ममा राजा पञ्चायतको विरुद्ध नेपाली जनताले गरेको सङ्घर्ष देखाइएको छ। फिल्ममा नीर शाह, हरिवंश आचार्य, मदनकृष्ण श्रेष्ठ र रामकृष्ण बम्जनजस्ता कलाकार मुख्य भूमिकामा छन्।
वीरु बाङ्देललाई जसराज किराती साहित्य पुरस्कार : पुरस्कारको अस्तित्व जोगाइरहन सकूँ- बाङ्देल
भोटको निम्ति जिर्ण राखिएको बाटो